ReTurkey: Turkiga wuxuu soo bandhigayaa barnaamijka 'Dalxiiska Badbaadada'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » ReTurkey: Turkiga wuxuu soo bandhigayaa barnaamijka 'Dalxiiska Badbaadada'
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Turkiga, Mehmet Nuri Ersoy
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Turkiga, Mehmet Nuri Ersoy, ayaa ugu yeeray kulan uu la qaatay danjireyaasha wadamada ugu sareeya dalxiiska iyo warbaahinta caalamiga ah ee Antalya, si uu ugu wargaliyo bilaabida xeerarka cusub ee barnaamijka “ReTurkey” iyo fursadaha khibradaha. Dhaqanka “Dalxiiska Nabdoon” ee Turkiga.
Shirka "ReTurkey" ayaa lagu soo bandhigay faahfaahinta dhammaan tallaabooyinka amniga ee lagu qaado "Barnaamijka Shahaadada Dalxiiska ee Amni" - laga bilaabo diyaaradda ilaa garoonka diyaaradaha laguna wareejiyo gawaarida hudheelka. Sarkaalka ayaa carabka ku adkeeyay in turkiga uu yahay wadankii uguhoreeyay yurub ee bilaabaya barnaamijka shahaada dalxiiska ee amni kaas oo sidoo kale kamid ah kuwa ugu horeeya aduunka dhowr arrimood.
Isaga oo carabka ku adkeeyay in Turkigu u baahan yahay inuu la qabsado caado cusub, wuxuu ka hadlay talaabooyinka cusub ee ay hirgalinayaan garoomada diyaaradaha ee dalka.
Isagoo sheegay in tirada codsiyada Shahaadada Dalxiis ee Amni iyo tas-hiilaadyo la caddeeyay ay si dhakhso leh u kordheen, Wasiir Ersoy wuxuu tilmaamay Covid-19 kiisaska ayaa aad ugu hooseeya magaalooyinka dalxiiska: Aydın, Antalya iyo Muğla.
"Mahadsanidiin kumanaan xirfadlayaal ah oo daryeel caafimaad ka shaqeeya halkan, magaalooyinkani sidoo kale waa xarumo caafimaad iyo sidoo kale dalxiis," ayuu yiri Wasiirka.
“Anagoo kafileyneyna tabashada dadka safarka ah ee doonaya inay dalxiis ku qaataan dalkeena inta lagu gudajiray mudadii cudurka, ilaa 1-da Luulyo, waxaan abuurnay xirmo caymis caafimaad oo ay kujiraan COVID-19. Si martiyadeena ay u dareemaan raaxo waxay soo iibsan karaan ceymis caafimaad iyaga oo ku kacaya 15, 19 ama 23 euro oo daboolaya lacagaha lama filaanka ah ee 3,5 iyo 7 kun oo euro siday u kala horreeyaan, ”ayuu raaciyay.
Baakadaha caymiska waxaa laga iibsan karaa shirkadaha duulimaadyada qandaraaska leh, goobo iib ah oo kala duwan oo laga heli karo agagaaraha koontaroolka garoonka diyaaradaha ama hawlwadeenada dalxiiska, iyo kanaalada internetka, ”ayuu yiri wasiirka.
Waxaa daahfuray Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Turkiga, oo ay u qaabeeyeen isla markaana si wada jir ah u hirgeliyeen dadweynaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waqtiga rikoodhka jebinta, "Shahaadada Dalxiis ee Amni" waxay soo bandhigaysaa tallaabooyin cusub oo ku saabsan dhinacyo kala duwan oo isugu jira gaadiidka ilaa hoyga, shaqaalaha xarunta iyo rakaabka 'xaalada caafimaad.
Mid ka mid ah noociisii ​​ugu horreeyay noociisa ah, Barnaamijka Shahaadada Dalxiiska ee Amniga oo ay hoggaaminayso Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa lagu soo saaray iyada oo ay ku darsadeen Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iyada oo lala kaashanayo dhammaan daneeyayaasha warshadaha ee Turkiga. , Ingiriis, Jarmal, iyo Ruush.